Maalinta: Meey 30, 2018
Farxada heshiiska wadajirka ah ee BURULAŞ
Wadaxaajoodka gorgortanka wadajirka ah ee ku lug leh shaqaalaha 460 ee ka shaqeeya BURULAŞ, oo ka mid ah shirkadaha Magaalada Bursa Metropolitan County, ayaa lagu gaadhay heshiis. Sida ku xusan heshiiska ay wada saxiixdeen BURULAŞ iyo Ururka Shaqaalaha Tareenka, mushaharka shaqaalaha waxaa loo xisaabiyaa boqolkiiba 6 boqolkiiba kii hore ee 16.74 [More ...]
Haydarpaşa Port 3 Ku-Meel-galka Makhaadinka Lahaanshaha
Dekadda Haydarpaşa 3 Warehouse oo loo beddelo Terminalka Rakaabka taasoo ay sabab u tahay Kooxda Raacways ee Waddanka Turkiga 1. Agaasime Goboleed ee agabka 2018 / 210447 GCC qiimaha xadka 6.361.598,38 TL iyo qiyaasta qiimaha 8.448.176,90 TL [More ...]
Claim of Protocol Protected ee Xarunta Ganacsiga ee Caanka ah
Waxaa la sheegay in xarun laga dhisay Mall of Shopping Shopping Mall ee magaalada Istanbul oo loogu talagalay khadka tareenka ee aan xitaa xaraash laga dhigin sanado ka hor. Wakiilka Golaha Magaalada Caasimadda Istambul ee Istanbul Nadir Ataman ayaa cinwaanka siisay xarunta tareenka dhulka hoostiisa [More ...]
Qaanuunka sharciga ah ee u saamaxaya ururada shaqaalaha iyo iskaashatada ka hoos shaqeeya gaadiidka dadweynaha in ay ku hoos shaqeeyaan dalladda magaalada iyo shuruudihii ugu dambeeyay ayaa la soo saaray. Dadaalka joogtada ah ee Madaxweyne Aziz Kocaoğlu, ku darista waxaa lagu sameeyay qodobka sharciga la xiriira. cusub [More ...]
Sida ee sannadka 2017 Turkey Railway Machines Industry Inc. Gawaarida noocyadoodu waa nooc gaar ah, oo daboolkooda sare iyo dhinacba si toos ah loo furi karo loona xiri karo badhan [More ...]
Shaqo ayaa ka socda garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul. Duullimaadyada tijaabada ee jid-gooyooyinka ayaa bilaabmay. Marxaladda koowaad ee garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul, 29, ayaa furi doonta Oktoobar. Boqolkiiba xNUMX garoonka diyaaradaha waa la dhammeeyay. Duulimaadyada duulista ayaa bilaabey tijaabinta aaladaha duulista. [More ...]
80 Milyan Sanad oo Euro ah oo loogu talagalay dhismaha Pristina-Silk Road
Bangiga maalgashiga ee Yurub wuxuu bixin doonaa 80 milyan oo yuuro oo loogu tala galay dhismaha Pristina - silk. Xukuumadda Kosovo waxay ogolaatay inay maalgaliso howlaha dhismaha ee qaybta Kiyev-Zakhch ee wadada Pristina-silk oo ay la socoto Luxembourg. [More ...]
Mujadele Channel Istanbul waa mawduuca todobaadkan ee la dagaallanka xajinta xayawaanka
Toddobaadka Mudaaharaadka Bey'ada oo ay soo qabanqaabisay 31 May-5 June oo ay ku taal laanta Istanbul ee Rugta Injineerada Deegaanka ayaa diiradda saari doonta dhammaan dhinacyada Kanal Istanbul sannadkan. Rugta Injineerada Deegaanka [More ...]
RayHaber 30.05.2018 Warbixinta Shirka
Dareewal in isgoyska Digniinta Signal Yaptırılacaktır Bridge iyo Culvert Dayactirka Works Yaptırılacaktır la taaban doonaa qarsoodiga ah Maqasyo gacan Oo Dayactir Masaafada Service Alınacaktır Van-Kapıköy Line: 51 + 000-112 + 300 u dhexeeya derbiga ilaashan waaya'aragnimo in Yaptırılca ah
Wasiir Arslan: c Mashruuceenna waa Muhiim u ah Ganacsiga Caalamka iyo Gaadiidka Gaadiidka
Wasiirka Gaadiidka Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, “Spice iyo Silk Road ee waagii hore ganacsiga adduunka ayaa muhiim u ah mashruucyadayada hadda jira waxay muhiim u yihiin ganacsiga adduunka iyo gaadiidka.” Ayuu yidhi. Arslan, [More ...]
Mashruuca Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Kayseri ayaa la dhammeeyaa dhammaadka Sannadka
Mehmet Özhaseki, Wasiirka Deegaanka iyo Magaalaynta, wuxuu ka qeyb galay shirkii May ee Golaha Ganacsiga Kayseri (KTO); Wuxuu sheegay in aasaaska tareenka xawaaraha sare la dhigi doono dhamaadka sanadka isla markaana mashaariicda garoonka la soo gabagabeyn doono. CTO [More ...]
Adana iyo Mersin dhexeeya daqiiqo 25 si loo yareeyo mashruuca tareen xawaare, Adana degmada Metropolitan ee Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State (TCDD) oo kaashanaysa dhismaha joogtada ah ee buundooyinka badan Mustafa Kemal Boulevard, [More ...]
Sincan-Batıkent Metro waxaa la bilaabey 6 Vagona
Sincan-Batıkent metro oo sugaya kuwa adeegsanaya lix-wagon iyo Kızılay'a safarka aan joogsiga laheyn ayaa dhaca dhamaadka. Wadada tareenka ee Sincan, oo ay ku shaqeyso seddex gaari, waxay socotaa ilaa lix gaari oo bishii Juun ah, wareejinta Batıkentna waxay tagaysaa bartamaha bisha Luulyo. Tan iyo markii la caleema [More ...]